လွတ်လပ်ရေး ရပြီးခေတ် (၁၉၇၀)ပြင်ဆင်
စစ်တပ်နှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးပြင်ဆင်
ရပ်ဘီစစ်ပွဲအက နှင့် ဖီဂျီသံပြိုင်တေးပြင်ဆင်
↑ Compare: Constitution of the Republic of Fiji။ The Fijian Government။ Subsection 3(3) reads: "This Constitution is to be adopted in the English language and translations in the iTaukei and Hindi languages are to be made available." Subsection 31(3) clarifies that Fiji Hindi is the intended meaning of "Hindi".
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ Fiji။ The World Factbook။ CIA။ 28 December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2007 South Pacific Games results။ 21 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖီဂျီနိုင်ငံ&oldid=712910" မှ ရယူရန်
၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၃:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၃:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။